MMnix - Myanmar News Exchange
× ☕ ဒီနေ့ ☀ မနကေ့ ▦ သတငျးဌာန ♦ ပွညျတှငျး ✈ ပွညျပ ❤ LifeStyles ♬ WebTV ⚽ အားကစား ❉ နညျးပညာ ε English $ ငှလေဲနှုနျး ⚡ ဆကျသှယျရနျ
Latest News - Yesterday!
150. ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်မှာ ခရိုအေးရှားကို အနိုင်ယူပြီး ပြင်သစ်ဗိုလ်စွဲ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်ကို ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့က Luzhniki ဘောလုံးကွင်းမှာ ကစားတာမှာ ပြင်သစ်က ခရိုအေးရှားကို ၄ ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ့ နိုင်ပြီး ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဗိုလ်စွဲသွားပါတယ်။ ပြင်သစ်အသင်းဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တုန်းကလည်း တကြိမ်ဗိုလ်စွဲထားတာကြောင့်၊ ဒါဟာ ပြင်သစ်အတွက်တော့ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဒုတိယအကြိမ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(☞ မူရင်း သတင်း site တွင် ဆက်ဖတ်ရန်။)
☞ အခြား နိုင်ငံတကာ သတင်းများဖတ်ရန်...
149. World Cup 2018: ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ နှစ် ၂၀ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ်အသင်း	-Duwun
#sports/world cup 2018	(မနေ့က)
☞ အခြား အားကစား သတင်းများ ဖတ်ရန်...
148. World Cup 2018: ၁၉၅၀ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ပိုင်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းယူမိတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား ဖြစ်လာတဲ့ မန်ဇူကစ်	-Duwun
ဖွင့်ရန်။ ပွဲချိန် (၁၈) မိနစ်မှာ သွင်းယူမိခဲ့တာပါ။
147. ကခငျြမှာ ဒုရဲအုပျဆီက မူးယဈဆေးဝါးမိ	-BBC
ဖွင့်ရန်။ ကိုယျတိုငျဖမျးထားတဲ့ စိတျကွှဆေးပွားတှကေို ယူထားတာကို သတငျးပေးသူကွောငျ့ ဖမျးမိခဲ့
☞ အခြား ပြည်တွင်း သတင်းများ ဖတ်ရန်...
146. အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် မွန်ပြည်နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၂)ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းမှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေ	-TachileikNews
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ထံ တိုင်ကြားစာပေါင်း (၄,၁၁၆)စောင်ကို လက်ခံရရှိ ထားပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၂)ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (၁)ဦးကို အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအလွဲသုံးစားပြု၍ အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ ကော့ထင်းစံပြကျေးရွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတို့အား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထောက်ကြံ့တိုးချဲ့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် တာဝန်မှ ရပ်စဲခံရသည့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသက်တင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းက သောင်နုမြေကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ခြံမြေအကွက်များ ရိုက်၍ ရောင်းစားပြီး ရရှိငွေများကို စာရင်းရှင်းလင်းရာ၌ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းပြေစာ အတုများ တင်ပြခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးမြင့်လွင်က ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
145. ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ကျင်းပနေစဉ် KNU တပ်မဟာ (၅) တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား	-KIC
ဖွင့်ရန်။ ဇူလိုင် ၁၅ရက်၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်း အဝေး ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဖာပွန်(မူတြော်)ခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၅)နယ်မြေ တွင် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့က အစိုးရတပ်မတော်နှင့် ကေအဲန်ယူ အဖွဲ့တို့အကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုမှာ ကေအဲန်ယူ ဖာပွန်ခရိုင်၊ လူသောမြို့နယ်၊ ခေးပူ (ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ဆန်းပိုင်းက လမ်းဖောက်လုပ်မှုကြောင့် စစ်ရေးတင်းမာမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေရာ) အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ဘက်က တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA တပ်မဟာ (၅) တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စောမူဟဲက ယခုလို အတည်ပြု ပြောဆို […]
144. ရခိုငျမှာ တာတမံကြိုးလို့ လယျ ဧက ၆၀၀ ကြျော ရမွေုပျ	-BBC
ဖွင့်ရန်။ ပုဏ်ဏား ကြှနျး မွို့နယျ က သိနျးပေါငျး ၂ထောငျ့ ခုနှဈရာကြျော အကုနျ အကြ ခံ တညျဆောကျ ခဲ့တဲ့ တာတမံ ကြိုးပေါကျ သှား
143. ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော်ကို အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့နေရာချ	-RFA
#muslim camp	(မနေ့က)
ဖွင့်ရန်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် နိဒင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော်ကို အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပြီးသွားပြီလို့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီနေ့ပြောပါတယ်။
142. တစ်ခါအား အပြည့်သွင်းထားရင် တစ်လလောက် အသုံးခံတဲ့ စမတ်နာရီ	-DigitalTimes
ဖွင့်ရန်။ စမတ်နာရီများဟာ အရွယ်အစား သေးငယ်တဲ့အတွက် အရွယ်ကြီး ဘက်ထရီများ ထည့်သွင်းလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီအတွက် စမတ်နာရီများရဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းဟာ တစ်ရက်လောက်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အားအပြည့်သွင်းထားရင် ငါးရက်ကနေ တစ်လလောက်အထိ အသုံးခံတဲ့ စမတ်နာရီ တစ်လုံးကို Mobvoi က မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမည်မှာ TicWatch Pro ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘက်ထရီ အသုံးခံအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာက အဖြူ၊ အမည်းသာ ပြသပေးတဲ့ မျက်နှာပြင် အပိုတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အပို မျက်နှာပြင်ဟာ Film compensated Super Twisted Nematic (FSTN) LCD ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖောက်ထွင်းမြင်ရပြီး OLED ရဲ့ အထက်မှာ ထည့်ထားပါတယ်။ […]
☞ အခြား နည်းပညာ သတင်းများဖတ်ရန်...
141. ဖားကန့်မြေစာပုံပြိုမှု သေဆုံးသူ ၁၅ဦးထိ တိုးလာ	-VOA
ဖွင့်ရန်။ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင် ဖားကန့်မြို့နယ်က ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက် ကမ်းပါးနံရံပြိုကျမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ၁၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးသူတွေကို ဒီကနေ့ သဂြိုဟ်လိုက်ကြသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကို လုံးခင်းဆေးရုံနဲ့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေကို မြစ်ကြီးနားဆေးရုံ အထိ ပို့ဆောင်ကုသပေးနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
140. လကမ္ဘာသို့	-M-Media
ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ M-Media – လာမယ့်နှစ်မှာ စတင်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အာကာသ အလည်ခရီးစဉ်အတွက် လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကနေ ၃ သိန်းအထိ သတ်မှတ်ဖို့ Amazon ပိုင်ရှင် ဂျက်ဖ်[Read More...]
139. လေဆာဖြင့် အမြင်ဆိုင်ရာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်း	-TimeAyeYar
ဖွင့်ရန်။ လေဆာဖြင့် အမြင်ဆိုင်ရာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်း